Waali | Suomen Mielenterveysseura
Waaliada waxaa lagu magacaaba garashada iyo waayo aragnimada, taas oo uusan qofku kala saari karin figradaha dareenkiisu siinayo iyo kuwa dhabta ah ee jira. Xanuunada culus qaarkood iyo kuwa mudada dheer ee xanuunka dhimirka ayay la xadhiidhaan astaamaha waalidu. Marka la eego dhanka kale, qofka aan u xanuunsanayn dhimirka ayay ku dhici karaan astaamaha waalidu tusaale in uu maqlo codad asaga quseeya oo cabsi weyn leh, oo toos ula xidhiidha wax dhacaya. Taas ayaa la yidhaahdaa dareenka waalida mudada gaaban ee qofku ka gudbo.
Waalidu waxay noqon kartaa mid ay la xariiraan dareen aan dhab ahyn, taas oo ay ugu caan san tahay, kuwa maqla wax aan aan jirin. Waalidaan qofka qaba waxaa kale oo uu maskaxdiisa ka sawiran karaa, in uu arkay arimo kala duwan ama wuu aamini karaa, arimahaas oo aan sida dhabta ah dhicin.
Waalidan in kastoo ay hayso qofka ayaa hadana waxaa laga yaabaa in nolosha qofku ku lee yahay xoog iyo awood, taas oo u suurta gelinaysa in uu si caadi ah u qabsado nolol maalmeedka. Astaamaha waalida ayaa usoo ifbaxa si isdabajoog ah, si kale marka loo eego astaamaha waalida ayaa waxaa ku jira astaamaha xanuunka dhimirka dadka u xanuunsana ma aha kuwo mar walba ku jira xaalada waalida.
Caawimida qofka waalan
Qofka ku jira marxalada waalidan waxaa macquul ah in uu si dhaqso leh u helo caawimada dadka qibrada u leh, qofka xanuunkaan u jiran waa in uu helaa dawo ku haboon iyo daryeel kale, si uusan xanuunku uga sii darin una dheeraan. Qofka waalan waa la hagi karaa waxaase haboon in aad geyso heeganka ciliminafsiga.
Marmarka qaar qofka xanuunsan ma rabo in la caawiyo, waxaa laga yaabaa in uu cabsi ka qabo khibradihii uu soo maray iyo dhalanteetka aduunkiisa ama in uusan fahan sanayn in uu u baahan yahay caawimaad. Hadii qofka waalidu hayso u dhaqmo si qasan oon la qiyaasi karin wuxuu soo wado ama qatar ku yahay naftiisa iyo xigaaladiisa, waxaad wici kartaa lambarka guud ee gargaarka degdega 112.